यस्तो छ रवि ओडको पहिलो गीत (भिडियो सहित) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
यस्तो छ रवि ओडको पहिलो गीत (भिडियो सहित)
काठमाडौं । दोस्रो नेपाल आइडल तथा गायक रवि ओड आफ्नो सांगीतिक जीवनकै पहिलो औपचारिक गीतको म्युजिक भिडियोमार्फत दर्शक तथा स्रोतामाझ आएका छन् । गत शुक्रवार यूट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको ‘मिठो बोलीले…’ गीतको म्युजिक भिडियोले छोटो समयमै दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ ।
गीतको म्युजिक भिडियो निकै आकर्षक बनेको छ । स्थापित कोरियोग्रँफर शिव बिकेको कोरियोग्राफी तथा निर्देशनमा उक्त गीतको म्युजिक भिडियो तयार भएको हो । भिडियोमा अभिनेत्री एलिशा राई तथा गायक रवि ओड नै फिचर्ड छन् । सुप्रिम पराजुलीले उक्त भिडियोलाई सम्पादन गरेका हुन् । रामेश्वर कार्की भिडियोका छायाँकार हुन् ।
बाल्यकालमा दक्षिणाका लागि रुने कलाकार को–को हुन् ?
२० लाखको अक्षयकोषका लागि ‘पर्वत संगीत साँझ’
कस्तो होला राजबंशीको देशभक्ति गीत ‘पागल’ (भिडियो हेर्नुहोस्)
शान्ता चौधरी र भगवती न्यौपानेका गीत सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाबाट आयो सञ्जीव खरेलको दशैतिहार गीत ‘फूलको माला हरर’ (भिडियो)
जन्मभूमिको भूमिको वर्णन गर्दै गायक सरोज कोइराला